Muğla Sıtkı Koçman University si loo qoro shaqaale tacliin | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaMuğla Sıtkı Shaqaalaha tacliinta sare ee Jaamacadda Koçman
11 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD
mugla sitki kocman shaqaale tacliin aan qarsooneyn
Jaamacadda Muğla Sıtkı Koçman waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta; Sharciga Lambar 2547, Xeerka Magacaabista iyo Dhiirigelinta Xubnaha Kuliyada iyo Codsiga Magacaabista iyo Dhiirigelinta Xubnaha Kuliyadaha Jaamacadda Muçla Sıtkı Koçmanwww.personel.mu.edu.t waa67 xubnood oo kulliyadeed.
b) Murashaxiinta u dalban doona aqoon-isweydaarsiga macallimiinta; www.personel.mu.edu.t waa Marka lagu daro 4 (afar) PDF ama xusuusta la qaadan karo ee lagu diyaariyey 1 (afar) qaab PDF ah oo ay kujirto foomka dalabka ee ku xusan tilmaamaha kore, oo ay kujirto shahaadada iskaashiga xirfadaha, liiska daabacan, shaqada sayniska iyo daabacaada, iyo dukumentiga adeegga ee Muunadda Codsiga Codsiga. iyo XNUMX (mid) fayl daabacan daabacan oo ay weheliso Waaxda Shaqaalaha.
Murashaxiinta ka gudbay Imtixaanka Shahaadada ee Xiriiriyaha isla markaana qaatay cinwaanka 'Professor Associate Professor' laakiin aan qaadan imtixaanka afka ah; Imtixaannada afka ah waxaa sameyn doona garsoorayaasha si ay u go'aamiyaan Guddiga Is-dhex galka (UAK) ka dib waqtiga kama dambeysta ah ee arjiga. (Qodobka 4aad ee Dardaaranka Balanta iyo Dhiirigelinta Dalbashada Meelaha Kuliyada ee Muğla Sıtkı Koçman University)
FIIRO GAAR AH: Ma jiro xubin shaqaale ah oo dalban kara baaxadda xaddiga 2547% ee la go'aamiyay si waafaqsan Qodobka 38aad ee Sharciga No 20.
1) Dhammaan musharraxiinta waa inay lahaadaan aqoonsi looga baahan yahay inay galaan adeegga Gobolka.
2) Codsiyada waxaa lagu sameyn doonaa 15 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la daabacay dib u dhacyada boostada lama aqbali doono.
3) U-sinnaanta shahaadooyinka laga soo qaatay dalal shisheeye waa in ay ansaxiyaan Golaha Kala-guurka.
4) Aqoonyahannada iyo macalimiinta la shaqeeya ma khusayn karaan xubnaha kuliyadda ee dhakhtarka.
5) Shahaadada Adeegga waxaa looga baahan yahay kuwa codsanaya meel ka baxsan Jaamacadda.
6) (*) Waxaa loo baahan yahay in la fuliyo shuruudaha afafka qalaad ee lagu sheegay qodobbada la xiriira ee Relişkin Regulation on the Principles in lagu waafajiyo barashada baridda luqadda shisheeye iyo baridda luqadda shisheeye ee hay'adaha tacliinta sare ..
7) Haddii Maamulka u arko inay ku habboon tahay, marxalad kasta oo lagu dhawaaqo waa la tirtiri karaa.
Muğla Sıtkı Koçman shaqaalaysiinta Shaqaalaha Akadeemiyada ee Jaamacadda Ko .man